Meizu 16S ကိုအတွင်း၌သီးခြားဂီတချစ်ပ်ပါသည့် adapter နှင့်အတူစတင်ပါလိမ့်မည် Androidsis
အာရုန်သည် Rivas | | Meizu, အခမဲ့ဂီတ, NOTICIAS
နောက်ထပ်အသစ် ထပ်မံ၍ မဖြန့်ချိသေးသော terminal အသစ်သည်ဖျက်ဆီးခြင်းကိုဖြစ်စေသည် Meizu 16S။ ဤအချိန်, ငါတို့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပြီးနောက် ဒီစက်၏ပထမဆုံးအွန်လိုင်းပေါက်ကြားမှု, အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာသည်အခြားဒေတာက၎င်းရဲ့ကျော်ကြားဖုန်းများတစ်ခုခုယူဆောင်လာလိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြသည် စီးရီး 16 သူတို့ပေါင်းစည်းခဲ့ပါဘူး။
မကြာသေးမီက Meizu အသိုင်းအဝိုင်းမှပရိသတ်မှမေးခွန်းတစ်ခုက Meizu ကိုတည်ထောင်သူဂျေ လာမည့်ကုမ္ပဏီဆန်းသစ်တီထွင်မှု။ ပရိသတ်များက Meizu 16S ၏ဒီဇိုင်းသည်သီးခြားဂီတချစ်ပ်များကိုပြန်လည်ထူထောင်နိုင်မည်လားဟုမေးသည်။ ထို့နောက် Meizu 16 Plus သည်ကောင်းသည်ဟုညည်းညူသည်။ သို့သော်တေးဂီတထုတ်လုပ်မှုသည်တကယ်မအံ့သြလောက်ပါ။ Meizu 16S သည်ပိုကောင်းမည်ဟုမျှော်လင့်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
ဤသို့တုံ့ပြန်ရန် Meizu ကိုတည်ထောင်သူ Huang Zhang က Jack Wong ဟုလည်းလူသိများသည် သီးခြားဂီတချစ်ပ်ပါသည့် adapter ကိုကုမ္ပဏီကမိတ်ဆက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ချိတ်ဆက်မှုအနေဖြင့်စီအီးအိုသည်ယခင်က built-in ဂီတချစ်ပ်ပါသည့်လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံးသည်တန်ဖိုးနည်းရိုးရှင်းသော Hi-Fi ဖြစ်ပြီးမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းစျေးနှုန်းထက်အဆပေါင်းများစွာပိုများကြောင်း၊
ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူသည် Type-C cable သို့ built-in နည်းပညာ၏ပုံကြမ်းနှင့် 3.5mm Type-C adapter ကိုလည်းဝေမျှခဲ့သည်။ ဤကေဘယ်ကြိုးအမျိုးအစားရှိနည်းပညာသည်သုံးစွဲသူများအားပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုကိုပေးလိမ့်မည် အသံအရည်အသွေးပိုကောင်းနိုင်ပါတယ်။ သူကဆက်စပ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပြီးသားဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
Meizu 16S အကြောင်းအများကြီးပြောခဲ့ပေမယ့် Wong ကဒါကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် စမတ်ဖုန်းကိုလာမည့်နှစ်မေတွင်ပြသမည်ဖြစ်ပြီး Meizu 16 ၏ဒီဇိုင်းနှင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အဓိကဖွဲ့စည်းမှုတွင်၎င်းကိုကြိုတင်ကြေငြာခြင်းမရှိသော Qualcomm Snapdragon 8150, chipset တပ်ဆင်ထားသည် ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့တွင်တင်ပြလိမ့်မည်။ သို့သျောလညျး terminal သည် 5G ကွန်ယက်ကိုအထောက်အပံ့မပြုပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Meizu 16S ကိုသီးခြားဂီတချစ်ပ်ပါတဲ့ adapter နဲ့အတူထုတ်လုပ်မှာပါ
Samsung ၏ 'Galaxy M' စီးရီးသည်ဘဝ၏လက္ခဏာများကိုစတင်ပြသခဲ့သည်။ Galaxy M2 Geekbench တွင်ပေါ်လာသည်
Android ကို mono ထဲဘယ်လိုသွင်းမလဲ